Wish Cleo kaThixo | Top slot Site | Mobile Casino Online | £€$800 Deposit Bonus :)
Ukuba ufuna ngomdlalo ngamnye kunye nenani ofanelekileyo Slot Bonus intanethi Iimbonakalo, ke Wish Cleo hi Evolution Gaming kufuneka enze. Le yamandulo slot ividiyo eYiputa-spiral ikuvumela ukuba ukudlala ewonke iimpawu umdlalo isiseko ezintathu kunye neempawu bonus Spin Free ezimbini. Funda okungakumbi ngale xa ufunda de kube sekupheleni.
Ukwazi Okunye malunga nemisebenzi slot Bonus Online
Njengoko kuchaziwe ngaphambili kwi, Wish Cleo liza base ezintathu iimpawu bonus umdlalo. Ezi mpawu zonke isebenze nandawoni ngexesha umdlalo isiseko. Wena ube Sands Of uThamsanqa, Yongeza Wild ekwazi kunye Wild ekwazi Guaranteed ziyavela ezifumaneka kulo mdlalo Bonus slot Online.
Lo mdlalo slot iza 5 reel kanye 25 paylines. Isimboli phezu reel ziquka ankhs, ubucwebe ezixabisekileyo, beetle scarab yaye umdlalo wakhe Ilogo (la onke amaxabiso aphezulu). Kwakhona kufuneka amakhadi sidlala eqhelekileyo eyenziwa A, K, Q, J, 9 yaye 10 (aba namanani asezantsi). I-Wild yi Cleopatra ukumkanikazi laseYiputa ngelixa Wazibhangisa i Pyramid umYiputa.
Ke kaloku, emva umdlalo isiseko iimpawu bonus. I-Sand Of uThamsanqa ikuvumela ukuba ukuguqula zonke umqondiso omkhulu-ixabiso kwi ekwazi zibe uphawu nje enye-value. nale, wena unethuba ngokuphumelela ezihamba kunye multipliers for Ukubhatalwa eziphezulu. I Dibanisa Wild ekwazi ubonakala ngokungakhethiyo kwaye neempawu zasendle kuvela kwi ekwazi ukuba Ukomeleza amandla yakho yokuwina. Ukuyohlala endle ezintlanu kwi payline esebenzayo ngaloo mvuzwana 500 imali kule nkqubo. Kuba Guaranteed Wild reel, ukuya ekwazi ezintlanu kuya kuba endle kuwo ukuba ngakumbi kuwe uhola winile rhoqo.
Ukuze spin ekwazi konke ufuna sisixa uphawu 30p. Kukho isibonelelo nokubheja ephakamileyo ekufuneka zenziwe yaye abadlali nga bakubhejele basonta nganye phezulu £ 60.
The Free osebenzisa Uphawu Of Le slot Bonus umculo umxokozelo
Lo mdlalo slot Ibhonasi Online iza ijikelezisa ezimbini free, angala: Ubutyebi ongunaPhakade Parade Cleo kaThixo. Zombini osebenzisa free ezivulwa xa ufika ubuncinane icons amathathu yephiramidi usichithachithe phezu reel.
Kuya kufuneka ukuba ukhethe enye liphuma ijikelezisa ezimbini khululeka ukudlala. Ukuba ukhetha i Ubutyebi Obungunaphakade ijikelezisa free, ngoko silindele ukudlala phakathi 5 yaye 10 osebenzisa free. kunjalo, Parade Cleo kuya kufuneka Cleopatra Wild icons eDibanisa up on emasondweni 5 ukukunceda kokufika ngokuphumelela ezihamba kunye.
Ngale game Bonus slot Online, unokuqiniseka yokuba ulundwendwe ixesha elide. Umdlalo base features bonus, kwakunye ijikelezisa free, ukunikela abadlali amathuba ukuze bazuze winile kwaye kuqinise Ukubhatalwa zabo.